Xasan sheikh ““Waxaa nasiib darro ah in ciidan ka amar qaata madaxweynihii hore ay weerar ku soo qaadaan hoygeyga. Waxaan horay ugu digay kuna celinayaa khattarta | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Xasan sheikh ““Waxaa nasiib darro ah in ciidan ka amar qaata madaxweynihii...
Xasan sheikh ““Waxaa nasiib darro ah in ciidan ka amar qaata madaxweynihii hore ay weerar ku soo qaadaan hoygeyga. Waxaan horay ugu digay kuna celinayaa khattarta
Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa goor dhawayd bartiisa baraha bulshada soo dhigay arintaas, oo uu ku tilmaamay dhibaatada ka imaan karto.
Sidoo kale Dagaalka galabta ayaa ka dhacay qeybo ka mid ah degmada Cabdulcasiis ee magaalada Muqdisho, gaar ahaan aagga Mirinaayo ee ay degan yihiin madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh iyo Shariif Sheekh Axmed.
Previous articleWar deg deg ah: dagaal Goor dhawayd ka bilaawday xaafada C/casiis oo ay daganyihiin Musharixiinta
Next articleRa’isal wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed oo soo saaray bayaan ku saabsan doorashada lagu wado dabayaaqada bisha June iney Itoobiya ka dhacdo
Sargaal Ciidanka Xooga oo magaalada uu Alshabaab ka saaray Aroos Cajiib...
Qarax lagu dilay Guddoomiye ku xigeenka amniga degmada Dayniile oo ka...
ku dhawaad 10 qof oo geeriyootay, ka dib toogasho xalay...